Google Play ဝန်ဆောင်မှုများ 7.0 SDK ကိုယခုရနိုင်သည် Androidsis
ယခုလအစောပိုင်းက ဂူးဂဲလ်ကအဓိက update အသစ်ရောက်ရှိပြီဖြစ်ကြောင်းကြေငြာခဲ့သည်aGoogle Play စန်ဆောင်မှုများ ၎င်းသည်ဗားရှင်းနံပါတ် ၇.၀ ဖြစ်ပြီးအသစ်နှင့်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းသည့် APIs အသစ်များကိုထပ်မံထည့်သွင်းခဲ့သည်။ ယခု update အတွက် SDK သည်ယနေ့အချိန်အထိနှောင့်နှေးခဲ့သည်။ ၎င်းသည် third-party developer များအနေဖြင့် APIs အသစ်၏အားသာချက်ကိုရယူရန်နှင့် ၄ င်းတို့၏ကိုယ်ပိုင် application များအတွက်လုပ်ဆောင်နိုင်မှုအသစ်များကိုပေးအပ်ရန်ဖြစ်သည်။
ဗားရှင်း ၇.၀ ရှိဤအင်္ဂါရပ်အသစ်များမှအပလီကေးရှင်းများအနေဖြင့်စက်၏တည်နေရာချိန်ညှိချက်များသည်အခြေခံတိကျမှုအဆင့်ကိုမီးမောင်းထိုးပြနိုင်မလားစစ်ဆေးရန်နည်းလမ်းသစ်တစ်ခုဖြစ်ပြီးအသုံးပြုသူအား configuration ကိုမမှန်ကြောင်းသတိပေးသည့် dialog တစ်ခုဖြစ်ပေါ်စေသည်။ တစ်ခု စိတ် ၀ င်စားစရာကောင်းသည့်နေရာများအတွက် API အသစ်သည်အသုံးပြုသူ၏အနေအထားနှင့်သူ့ပတ် ၀ န်းကျင်ကိုဆုံးဖြတ်ပေးသည့် Yelp ကိုယ်တိုင်သို့မဟုတ်အခြားသူများကဲ့သို့ GPS ကို သုံး၍ သုံးသောအက်ပလီကေးရှင်းများအတွက်ပြီးပြည့်စုံသော API ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်ဂိမ်းထိန်းချုပ်သူကဲ့သို့စက်ကိုအသုံးပြုရန် Close connection API.
ဤ API များသည် developer များအသုံးပြုသူအတွေ့အကြုံတိုးတက်စေရန်သော့ချက်ဖြစ်သည် သင့်ကိုယ်ပိုင် applications များ။ အသုံးပြုသူပမာဏ၏ရာခိုင်နှုန်းနှင့်အိပ်မက်၏အချိန်ဒေတာသည်အဘယ်အရာအတွက်ဒေတာအမျိုးအစားနှစ်မျိုးကိုလက်ခံရရှိသည့်, ဖော်ပြခဲ့တဲ့တ ဦး တည်းတူသောနေရာများများအတွက် API ကိုအတူ, တည်နေရာတိကျစွာ၏အဆင့်ကိုစစ်ဆေးရန်တစ်ခုသို့မဟုတ် Fit များအတွက်တစ်ခု, နှင့်အတူဖြစ်စေ။
အခြားသူများ ဂူဂဲလ်ပလေးဝန်ဆောင်မှုများတွင်ပေါ်လာသည့် API များ 7.0 သည် Android TV အတွက်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်အထက်တွင်ဖော်ပြခဲ့သော Google Play Games နှင့်နီးစပ်သည်။ ဒုတိယမြောက်တစ်ခု ဂိမ်းကစားသူများအားသူတို့၏ဖုန်းများနှင့်တက်ဘလက်များကို Controller များအဖြစ်အသုံးပြုရန်ခွင့်ပြုသည် Android မှာသင်ကြိုက်နှစ်သက်သောဂိမ်းများကိုပိုကောင်းအောင်ပြုလုပ်ပါ။ ခေါင်းစီးဗွီဒီယိုသည်၎င်းကို၎င်း၏ဘုန်းအသရေအားလုံးတွင်ပြသထားသည်။
Android Places ၏ဘလော့ဂ်တွင် API Places ကိုမနေ့ကဖော်ပြခဲ့ပြီး၎င်းသည်၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်မျက်နှာပြင်ပါသောနေရာများကိုရွေးချယ်ခဲ့သည်၊ အသုံးပြုသူ၏တည်နေရာအတိအကျကိုလက်ခံသည်။ ထိုနေရာ၏အသေးစိတ်အချက်အလက်ကိုပြပါ (ဖုန်း၊ ဝက်ဘ်ဆိုက်သို့မဟုတ်ဆိုက်အမည်) သို့မဟုတ်အသုံးပြုသူအချိန်ကိုဤနေရာများ၏အမည်များတွင်ရိုက်ထည့်အချိန်ကိုသက်သာစေရန် autocomplete ကိုအသုံးပြုပါ။
Un developer များအဘို့သီးသန့် SDK နှင့်ယနေ့မှ download လုပ်နိုင်ပါတယ် ဒီကနေ.
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Androidsis ပါ » NOTICIAS » ဂူဂဲလ်ပလေးဝန်ဆောင်မှုများ ၇.၀ SDK ကိုနေရာဒေသများ၊ နီးကပ်သောဆက်သွယ်မှုများနှင့်အခြားအရာများအတွက် APIs အသစ်များဖြင့် developer များရရှိနိုင်ပါသည်